Soo -saareyaasha & Soo -saareyaasha USB Flash Drive - Shiinaha USB Flash Drive Factory
Qaab -dhismeedka Shirkadda
Bangiga Awooda Sare
Bangiga Awoodda Magnetic
Bangiga Awoodda Wireless
Bangiga Awoodda Degdegga ah ee Degdegga ah
Istaagiyaha xeedho bilaa wireless ah
Bamboo & xeedho bilaa Wireless ah
Wareeji USB Flash Drive
Iftiinka LED -ka ee USB -ga
Baasaboorka & Qoriga USB Drive
PS5 Station Charging Controller
JoyCon oo loogu talagalay Nintendo Switch
1. Magnetic 10000mah PD22.5W Qi15W Dhibcaha Iibinta Bangiga Awoodda Degdegga ah: LED 4 LED waxay tilmaamaysaa heerka batteriga, mid walba 25% awoodda. W 15W silig ...
15W Magsafe 3 ee 1 Wireless ...
1. 15W Magsafe 3 in 1 Wireless Fast Charging Bracket Bracket Selling Points: magnet Dhisay gudaha magnetic xoog leh ayaa lagu xareeyay xayeysiinta baabuurta ee aaladaha. In 3 gudaha ...
Dual 10W Bamboo & Qoryo ...
1. Dual 10W Bamboo & Alwaax Degdeg ah Wireless Charger Iibinta Qodobbada: pad suufka ku-dallacaadda bilaa-wireless-ka ah ee u habboon si waafaqsan hindisaha cagaaran ....
Koobka nuugista 15W Fast Mobile ...
1. Koobkii Wax -dhiska 15W Qodobbada Iibiyaha ee Wireless Charger -ka Degdegga ah ee Mobilka: ① Waxaa lagu dhisay fiilo 15w si degdeg ah loogu dallaco suuf bilaa wireless ah oo leh koob nuugid. Brand Summada Astaanta ...
Kaarka Amaahda ee Kable-ka lagu dhisay ...
1. Kaarka Amaahda ee Kabaha Dhexdiisa ah ee 10W Hadiyadaha Dhibcaha Iibiyaha ee Wireless Charger Fast:
Kaarka Amaahda Bamboo Alwaax USB Flash Drive
Lambarka Shayga: MQ-921U
Awoodda: 64MB ~ 128GB
Baasaboorka & Wood-ka USB-ku-habboon ee USB-ga ee aalad kasta oo leh USB interface.
Naqshado iyo agabyo kala duwan oo leh astaan ​​u gaar ah si kor loogu qaado ganacsigaaga.
Lambarka Shayga: MQ-920U
Naqshado iyo agabyo kala duwan oo leh astaan ​​u gaar ah xayeysiinta ganacsiga.
Rubber jilicsan ee PVC Custom Memory Stick
Lambarka Shayga: MQ-919U
Qaab wax -ku -ool ah oo run u ah rumaynta fikradahaaga illaa intaad rabto, noo sheeg ama na sii hal sawir, waxaan kuu samayn doonnaa farshaxanka 3D 48 saacadood gudahood.
Caado bilaash ah oo loogu talagalay USB -ga jilicsan ee USB -ga ah ee loogu talagalay dhiirrigelinta astaanta gaarka ah. Midabada, qaababka, qiyaasta dhammaantood waxaa cayimay macaamilka ka hor intaan la soo saarin tiro -koob.
Qaab -dhismeedka Kartuunka PVC -ga ee USB Flash Drive
Lambarka Shayga: MQ-918U
Xulashooyin kala duwan inta aad rabto, dad badan ayaa doorta inay samaystaan ​​gaadiid, maraakiib, diyaarado, xayawaan iyo xitaa walxaha caadiga ah ee maalinlaha ah sida nalalka nalka, kabaha iyo cuntada.
4 in 1 Micro USB Lightning Type C OTG USB Flash Drive
Lambarka Shayga: MQ-917U
OTG 4 in 1 xusuusta waxay ku dhejisaa micro USB nooca C iyo adabtarada hillaaca, horay ugu sii shub faylasha USB-ga oo ka dhig mid aan la tirtirin, waxay beddeli kartaa sumadda iyo sumadda.
Si otomaatig ah u socodsiiya: JPG, mp3, fiidyow, degel iwm marka aad USB-ga ku xirato kombiyuutarka ama aaladaha kale, taageer sirta si loo ilaaliyo xogtaada, furaha sirta waxaa beddeli kara isticmaale.
Lambarka Shayga: MQ-511U
Clip -ka midabka leh ee midabka leh ayaa iftiiminaya naqshadda astaanta ee kor u qaadista sumcadda ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Looma baahna in la rakibo softiweer kasta, kaliya geliso flash -ka USB -ga aaladda leh interface USB.
OTG 3 in 1 Nooca Hillaaca C Wareega USB Flash Drive
Lambarka Shayga: MQ-916U
USB OTG (On-The-Go) oo la jaan qaada dhammaan taleefannada casriga ah iyo kiniinnada leh shaqada OTG, looma baahna rakib barnaamij kasta, si fudud u wareeji xogta u dhexeeya taleefannada casriga ah ee OTG-ga karti u leh, kiniiniyada iyo kombiyuutarada, waxqabadka wareejinta waxay kuxirantahay aaladda martida loo yahay.
Taageer nidaamka hawlgalka ee Android, Windows, Mac OS, IOS iyo Linux.
Lambarka Shayga: MQ-603U
Awood buuxda UDP oo suuliga wadata suulka ayaa soo saarta naqshadda astaanta ee kor u qaadista sumadda gaarka ah.
Looma baahna in la rakibo softiweer kasta, kaliya geliso flash -ka USB -ga aaladda leh interface USB si loo wareejiyo, loo kaydiyo loona kaydiyo xogta.
Iftiinka LED -ka ee USB -ga oo leh Silikoon Lanyard
Lambarka Shayga: MQ-516U
Suuliga silsiladda leh ee suulka leh ee suulka wadata naqshadda astaanta ee LED -ka ee kor u qaadista sumadda gaarka ah.
Looma baahna in la rakibo softiweer kasta, si fudud ugu dheji laptop -kaaga ama desktop -ka si aad u hesho ama u kaydiso xogta.
Lambarka Shayga: MQ-514U
Nashqad qurux badan ayaa iftiimisay naqshadeynta astaanta LED -ka midabka leh ee kor u qaadista sumadda gaarka ah, cabbir la mid ah furaha.
Bareeso oo ciyaar, oo la jaan qaada USB 3.0 USB2.0, taageer Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/win10 Mac OS 9.X/Linux2.4 ama wixii ka sareeya.
Ku shid Logo Slim Metal USB Drive leh Buckle
Lambarka Shayga: MQ-515U
Midabyo badan oo caato ah oo caato ah oo midabyo badan leh oo leh nalka naqshadaynta astaanta ee loogu talagalay dhiirrigelinta astaanta gaarka loo leeyahay.
Iftiimin Logo Slim Metal USB Flash Drive
Lambarka Shayga: MQ-513U
Nashqad qurux badan ayaa iftiimisay naqshadda astaanta LED -ka midabka leh ee kor u qaadista sumadda gaarka ah.
Lacag dhaqso leh oo fiiqan ayaa u socota dhanka boqolka watt, iswaafajinta borotokoolka ayaa la wanaajiyay si loo ...